नेकपा फुटाउने ‘रअ’को नयाँ रणनीति, यस्तो छ रअ को खतरनाक डिजाईन ?::Pathivara News
नेकपा फुटाउने ‘रअ’को नयाँ रणनीति, यस्तो छ रअ को खतरनाक डिजाईन ?
काठमाडौ भारतीय जासुसी सस्था ‘रअ’ले आफ्नो नेपाल रणनीति समीक्षा गर्ने भएको छ । सिक्किम भारतमा बिलय गराउनेदेखि बंगलादेश स्वतन्त्र गराउनेसम्मको भूमिका ‘रअ’ कै योजनामा भएको थियो ।
नेपालमा जनयुद्धदेखि गणतन्त्र ल्याउनेसम्मको योजना पनि ‘रअ’को योजनामा भारतले पूर्ण सहयोग गरेको चर्चा हँुदैआएको छ ।
यसको प्रमाणको रुपमा जनयुद्धमा लामो समय प्रचण्ड भारतमा नै बस्नु र नेपाल प्रहरीले सूचना दिंदा समेत पक्राउ नगरी उल्टै संरक्षण गरेको कुरा समेत प्रचारमा आइसकेको छ । तत्कालीन माओवादी र प्रमुख दलहरू तत्कालीन नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच १२ बुँदे सहमति पनि भारतकै सहयोगमा भएको थियो ।
‘रअ’कै योजनामा भएका यत्रा परिवर्तनहरूपछि हालको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( नेकपा) का नेताहरू विशेषतः अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एकाएक चीनको कडा समर्थकका रुपमा देखिएपछि ‘रअ’ले नेपाल रणनीतिमा तत्काल फेरबदल गर्ने भएको छ भने उस्तै परे १२ बँुदे समझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने दल र ब्यक्तिसंग ‘रअ’ ले हिसावकिताव माग्ने तयारी गरेको सुरक्षा स्रँेतको दावी छ ।
‘रअ’ ले नयाँ एजेन्ट नियुक्त गर्दै
भारतमा नरेन्द्र मोदी सरकार आएपछि ‘रअ’ का सबै भन्दा बढी एजेन्ट नेपालमा रहेको देखिएपछि पार्ट टाइमर रहेका हजारौ एजेन्टहरूलाई हटाएको थियो । हाल नेपालमा ‘रअ’ले पुन एजेन्टहरू राख्न अत्यावश्यक देखेको र नयाँलाई नियुक्ति दिने तयारी धमाधम भैरहेको समाचार छ ।
‘रअ’को मुख्य ध्यान अब नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) पार्टीलाई टुक्र्याउनेतिर केन्द्रित हुने भएको छ । त्यसका लागि बफादार ब्यक्तिको खोजी भइरहेको स्रँेत बताउछ । बिभिन्न कोणबाट संभावित ब्यक्तिहरूसंग ‘रअ’का दूतहरूले छलफल अगाडि बढाइरहेका छन् ।
आजभोलि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) केही नेताहरू दरवारमार्गका महंगा होटलहरूका वारहरूमा महंगा रक्सीसंग झुम्मिएको र तालु खुइलेका, कपाल र जुगा सेताम्मे भएका नौला ब्यक्तिहरूसंगको जमघटमा बस्ने गरेको नेपालको गुप्तचर स्रँेत बताउछ । जुन जमघट ‘रअ’कै डिजाइनमा भएको अर्थ लगाउन थालिएको छ । साँघु अनलाईनबाट